လေ့လာ 27 | ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် ဂွ | ဇန်နဝါရီ 28, 2018 | ဆုချီးမြှင့် Winners |0မှတ်ချက်များ
လေ့လာ 27 isawebsite ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး agency Asturias မှာတည်ရှိပါတယ် , ကျွန်တော်အွန်လိုင်းစတိုး၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက်အထူးပြု, web hosting, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, SEO positioning and we offer face-to-face courses in Oviedo (Asturias), which began its journey in the web services in 2008.
For the design and development of web pages and online stores we use content managers such as WordPress ကို, Joomla or Prestashop adapted to the needs of our customers so that the user experience is the best and most pleasant as possible.
For web hosting we use private servers located in စပိန်, with exclusive access to the administration area of ​​our customers, နဲ့ web positioning ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, it is now essential to haveagood positioning in search engines such as Google က, Bing သို့မဟုတ် 'to yahoo to find us easily.